WAR DEG DEG AH: Shacabka koonfurta iyo waqooyiga Gaalkacyo oo qaaday tilaabo ka dhan ah Puntland iyo Galmudug. – Puntland News.net
Home 2017 February 9 Somali News WAR DEG DEG AH: Shacabka koonfurta iyo waqooyiga Gaalkacyo oo qaaday tilaabo ka dhan ah Puntland iyo Galmudug.
WAR DEG DEG AH: Shacabka koonfurta iyo waqooyiga Gaalkacyo oo qaaday tilaabo ka dhan ah Puntland iyo Galmudug.
February 9, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Gaalkacyo 9 February 2017:- Kumanaan shacab ah oo ka kala yimid koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa maanta cagta mariyay jidgooyooyin iyo xaduud beenaad dhexyaalay magaalada Gaalkacyo gudaheeda, kuwaas oo kala qeybiyay shacabka walalaaha ah ee gobolka Mudug iyo guud ahaan Soomaaliya.
Tilaabadaan ayaa daba socota dabaal degyo midaysan oo magaalada ka socday oo lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Farmaajo, islamarkaana loogasoo horjeeday kala qeybsanaanta shacabka Gaalkacyo.
Mid kamid ah shacabka ka qeyb qaadanayay howgalkaan ayaa Puntlandnews u sheegay in maanta laga bilaabo aysan jiridoonaan wax la yiraahdo isbaaro iyo xuduud beenaad ah lagu kal a qeybiyo shacabka walaalaha ah sidoo kalena ay isku furan yihiin isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha.
Waxaa xusid mudan, in wadooyinkaan xirnaa ay furi wayeen Gaas iyo Guuleed, balse ay shacabka fureen, taasoo muujinaysa awooda shacabka.